ओलीको छटपटि, संसद विघटन गरेर चुनावमा जाऔं — Imandarmedia.com
ओलीको छटपटि, संसद विघटन गरेर चुनावमा जाऔं
काठमाडौ। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आवश्यक रहेकोले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका छन्।मंगलबार काठमाडौंमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले प्रतिनिधिसभा नचलेकोका कारण निर्वाचन आवश्यक रहेको बताए ।
यो प्रतिनिधिसभा चलिरहेको छैन। म अहिले पनि भन्छु ताजा जनादेश आवशयक छ। मिल्नै पर्दैन वहाँहरुले नै गराए पनि हुन्छ। गठबन्ध छँदैछ मिलेर लड्छौँ भन्नु भएकै छ। यो गठबन्धले चुनाव गराए भयो नि त’ उनले भने।
ओलीले अढाई महिनासम्म सरकार बन्न नसक्ने अकर्मनिय स्थितीमा कुनै काम नहुने समेत बताए। समय खेर फाल्नु हुँदै ताजा जनादेशमा गएर देशलाई गतिशिल बनाउनुपर्छ’ उनले थपे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सरकारले बिर्सेको हो रु भनेर सोधेका छन् ।
मंगलबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्झौता गर्दाताका सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरू नै अहिले सरकारमा रहेका बेला एमसीसी सम्झाउन अमेरिका अगाडि आउनुपरेको बताए। सरकारको स्मरण शक्ति कम भएको हो कि के हो ? उहाँहरूले नै सम्झौता गर्नुभएको हो।
त्यतिखेरकै सम्झौता गर्नेहरू कोही प्रधानमन्त्री, कोही किङमेकरु हुनुहुन्छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि आएन, एमसीसी सम्झाउन फातिमा सुमार नै आउनुपर्ने हो कि ?, ओलीले थपे, यो सरकारको दृष्टिकोण के हो ? १६५ सिट भएको । पारित गर्ने हो कि होइन हामीलाई केही सेयर गर्नुभएको छैन । हामीले किन आफ्नो धारणा दिने ?
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले केही साता पहिले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, सत्तारुढ दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईलगायतसँग एमसीसीबारे छलफल गरेकी थिइन्।
एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा दर्ता गरिएको छ । उक्त सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न बाँकी छ। एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच विवाद रहेको छ ।ओलीले आसन्न महाधिवेशनमा पनि पार्टी अध्यक्षमा दोहोरिने संकेत गरेका छन् ।
मंगलबार सम्पादकहरुसँगको छलफलमा अध्यक्षमा दोहोरिने कि नदोहोरिने भन्ने प्रश्न उठेपछि ओलीले सांकेतिक रुपमा दोहोरिने बताए।मैले एउटै कलास दोहोर्याएर पढ्दिनँ भनेको थिएँ, त्यो ठीक हो,’ ओलीले भने, ‘तर, कलास सकिएपछि के गर्ने त ?’ उनले थपे, ‘ अध्यक्षभन्दा अर्को कुनै पद नभएपछि के गर्ने त ?’
ओलीले एमालेको आउँदो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुने पनि दावी गरे ।उनले भने, ‘दशौं महाधिवेशनबाट हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुनेछ, यो नोट गरेर राखेहुन्छ।’ओलीले पार्टीभित्र विचारको विविधतालाई स्वीकार गरिएको पनि बताए । एमालेको दशौं महाधिवेशन मंसिरमा हुँदै छ ।
ओलीले सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले सरकारले संविधान मिच्दा पनि मिडिया चुप लागेको आरोप लगाए । मिडियाले आलोचना नगर्दा सरकारले गल्ती गरिरहेको छ, उनले भने, हामीलाई सञ्चारले खबरदारी गरेको कारण गल्ती कम भयो ।
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले सुदुरपश्चिम प्रदेशको ईन्चार्ज आफू नै भएको बताएका छन् ।आज दश बुँदे सहमति कार्यान्वयनको लागि गठित कार्यदलको बैठकपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू नै सुदुरपश्चिम प्रदेशको ईन्चार्ज भएको बताएका हुन् । उनले दश बुँदे सहमतिलाई कार्यान्व्यन गर्ने सवालमा आज गम्भीर छलफल भएको जनाए ।
उनले भने,‘त्यसका लागि २०७५ साल जेठ २, जेठ ३ र पछिल्लो समय पार्टीमा क्रियाशीलहरुको कामको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर अघि बढ्न छलफल गरिएको छ।’ उनकाअनुसार विवाद देखिएका ठाउँमा कुरो मिलाउने सहमति भएको पनि सुनाए । उनले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कुनै विवाद नभएको पनि प्रतिक्रिया दिए ।
उता, भीम रावलले दश बुँदे धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन भैसकेकोले अब केही ठाउँमा मात्रै बाँकी रहेको सुनाएका छन् । उनले अहिले पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्या हल हुँदै जाने विश्वास दिलाए।